I-10 yezona shampu zine-2-in-1 kunye neemeko zokulungisa
[ad_1] Ngaba ungomnye wabo bahlala bebaleka kusasa? Ngaba uyakuzonda ukulinda i-conditioner ukuba ifakwe emva kokuba uhlambe iinwele zakho? Ukuba kunjalo, ngethamsanqa kuwe, kukho iitoni zeemveliso zokhathalelo lweenwele phaya ezicoceka kunye nemeko yeenwele zakho ngaxeshanye. Wena… Qhubekeka ukufunda I-10 yezona shampu zine-2-in-1 kunye neemeko zokulungisa
ipapashwe 15 Septemba 2021
Ukwahlulahlula njenge ubuhle
Ubuhle beenkwenkwezi ezili-10 obuyileyo emva kokuzola
[ad_1] NSWKutheni uAlison Porter anyamalale kwizikrini emva kwempumelelo yeCurly Sue, wenza ntoni uSvetlana Loboda xa wayeshiya iqela le-VIA GRA, kwaye u-Andie MacDowell wakwazi njani "ukuphinda abuyele" kumdlali weqonga ukuya kwimodeli? Ubuhle beenkwenkwezi ezili-10 obuye bathandwa emva kokuzola. USvetlana Loboda “Bonke abantu… Qhubekeka ukufunda Ubuhle beenkwenkwezi ezili-10 obuyileyo emva kokuzola
ipapashwe 10 Septemba 2021
Iiserum zobuso ezi-5 ndiza kuzithenga kwakhona
[ad_1] BNgenxa yezi mveliso, ndiyekile ukucinga ngesiseko kubomi bemihla ngemihla, ndathatha ukhathalelo olufanelekileyo ebusuku (ngaphandle kolusu olunamafutha kusasa), ndalibala ngokuxobuka kwaye ndenza lula indlela yesiqhelo yemihla ngemihla kangangoko kunokwenzeka - ukuba Unyango lwakho yiserum yobuso, yonke enye into iya kulandela. Yonke i… Qhubekeka ukufunda Iiserum zobuso ezi-5 ndiza kuzithenga kwakhona
ingaba oomama bethu benjani cream ngoku?
[ad_1] I-BAchromin brand iqhelekile kuye wonke umntu owakha wanomdla kwingxaki yokukhanya kwesikhumba. Kwaye ukuba ngequbuliso khange uve ngaye, buza unyoko-uyazi ngokuqinisekileyo. I-cream ekuphela kwayo yamabala amadala i-Achromin, neyayisetyenziswa ngabafazi e-USSR, yaveliswa yi-Bulgarian… Qhubekeka ukufunda ingaba oomama bethu benjani cream ngoku?
I-35 iimbaleki ezininzi ezithandekayo zexesha lethu
[ad_1] I-HF edume ngokwenza umthambo emva kokuphela kwekhondo labo lezemidlalo, kwaye yintoni eyona mdlali webhola ekhatywayo mhle eRussia? Inxalenye yokugqibela yenqaku malunga namantombazana amahle kwezemidlalo. Eyokuqala neyesibini zifunde iinxalenye zonxibelelwano. UMargarita Mamun UMargarita Mamun izihlandlo ezisixhenxe waba yintshatsheli yehlabathi… Qhubekeka ukufunda I-35 iimbaleki ezininzi ezithandekayo zexesha lethu
Iimveliso zeenwele ezi-5 ndizithenga kaninzi
[ad_1] NGAPHANDLE ngeshampu, ukutshiza okunyibilikayo, ingcambu yevolumous mousse kunye nezinye iimveliso endizisebenzisayo ukuya kulahleko wokugqibela. USofia Vorobyova uBuhle beHackHack Shampoo yokongeza ivolumu kwiinwele ezongezelelweyo zeShampoo kunye nesilungisi sokuthambisa Isithambisi sokuthambisa, iMoroccanoil Uphawu lwakwa-Israeli iMoroccanoil ibigcina iinwele zam ekomeni nasekuqaqeni isithuba seminyaka emithathu.… Qhubekeka ukufunda Iimveliso zeenwele ezi-5 ndizithenga kaninzi
Iimbono ezingama-40 ezimhlophe zenzipho yokuhombisa
[ad_1] Iimbono ezimhlophe ezingama-40 zezikhonkwane zenzipho [ad_2]
Iindima ezi-8 ezintle zika-Angelina Jolie
[ad_1] V Ekuqaleni kobomi bakhe, oyena mfazi mhle emhlabeni, ngokutsho kwephephancwadi iVanity Fair, endaweni yelokhwe ezimnyama zeti, wayehamba ngeebhulukhwe zofele kwiikhaphethi ezibomvu. Iindima zeemovie zazifanelekile: UGia - imodeli yefashoni enengqondo engazinzanga, intle ngobuqhetseba uLara Croft, umntwana uKate… Qhubekeka ukufunda Iindima ezi-8 ezintle zika-Angelina Jolie
Izinketho ezingama-20 zokuzilungisa ezandisa iinzipho zakho
[ad_1] Iindlela ezingama-20 zokuzicoca ezolula iinzipho zakho [ad_2]
Iinyani ezili-10 obungazi ngo-Elizabeth II
[ad_1] TOQueen of Great Britain yeyona dosi inde inezikhundla phakathi kwabaphilayo. NgoJulayi kuphawulwe isikhumbuzo seminyaka engama-65 sokubekwa kwakhe. Ngeli xesha, u-Elizabeth II ukwazile ukuphendula i-3.5 yezigidi zeeleta, ukubazi oopopu abasixhenxe kunye nokudibanisa ingqokelela ye-5,000 yeminqwazi. Ezona nyaniso zinomdla malunga nokumkanikazi zikwi… Qhubekeka ukufunda Iinyani ezili-10 obungazi ngo-Elizabeth II
Iinkwenkwezi ezingama-20 ezinxiba iiglasi kodwa ubungazi
[ad_1] D Kwikhaphethi ebomvu, bakhetha iilensi, kwaye ngexesha labo lesisa lokudubula umboniso nakwiminyhadala yezentlalo, banxibe ngokuzingca iiglasi. Kukhetho olukhethekileyo lwe-BeautyHack kukho iinkwenkwezi ezingoyikiyo ukubizwa ngegama "ngamehlo amane". Ndikholelwe, uluhlu beluya kuba namabhongo ngakumbi ukuba uninzi loosaziwayo aluzange… Qhubekeka ukufunda Iinkwenkwezi ezingama-20 ezinxiba iiglasi kodwa ubungazi
Yeka! Iinwele ze-8 ezindala ngokungathandekiyo
[ad_1] Yima! Iinwele eziyi-8 ezindala kangako [ad_2]
Iinkqubo ezili-15 zikamabonwakude zaseBrazil eziphule iirekhodi ngokubukwa
[ad_1] Ukusuka “kumakhoboka eIzaura” ukuya “kwithemba laseBrazil”! On BeautyHack - olona bhanyabhanya lubalaseleyo waseBrazil kangangeminyaka engama-36, eyayisasazwa eRashiya. “Ikhoboka uIzaura” Olu luhlu lwaqala ukuboniswa ngo-Okthobha 11, 1976. Kwi-USSR, “Ikhoboka u-Izaura” laboniswa kuphela ngo-1988- yayiyeyokuqala ye-opera kumabonakude weSoviet.… Qhubekeka ukufunda Iinkqubo ezili-15 zikamabonwakude zaseBrazil eziphule iirekhodi ngokubukwa
I-20 yeenwele ezithandwayo zeenwele ezintle
[ad_1] UBeautyHack uqokelele ukhetho lweenwele zabantu abadumileyo abathi ngokwendalo bazuze imicu emincinci. Kwaye ii-stylists kunye ne-trichologists baxelele indlela yokukhathalela iinwele ezinjalo kunye nokuba kuthetha ntoni ukwenza isitayile. UVyacheslav Gordeev ongumenzi ophezulu weNikolskaya Club salon Inja yeCocktail Beach Spray, u-Evo uyandinceda ukuguqula iinwele ezomileyo zibe zintle kakhulu… Qhubekeka ukufunda I-20 yeenwele ezithandwayo zeenwele ezintle
I-5 yeepowder zobuso ezigqwesileyo ngokutsho kwabafundi beBeautyHack
[ad_1] NGEENKXASO-mali ukusuka kwi-799 ukuya kwi-4,000 yeeruble, ebisetyenziswa ngabafundi beBeautyHack iminyaka emininzi! Icompact powder Prisme Visage, iGivenchy Natalia Mikhalyuk-Nehme Kudlula iminyaka emininzi, utshintsho lwePrisme Visage, kunye nomgubo uhlala uyintandokazi yamantombazana amaninzi. Ndiza kuqala ngoyilo lwale nto ithengiswa kakhulu kwilizwe lezinto zokuthambisa… Qhubekeka ukufunda I-5 yeepowder zobuso ezigqwesileyo ngokutsho kwabafundi beBeautyHack
Isifuba Phambili: 8 Iinkwenkwezi ezingaphumelelanga ngeMammoplasty
[ad_1] Phambili Ebeleni: 8 Iinkwenkwezi ezingaphumelelanga ngeMammoplasty [ad_2]
Ukukhetha okungcono kweenkwenkwezi
[ad_1] Iimbono ezili-15 ezivela kwikhaphethi ebomvu, ezifanelekileyo ebomini bokwenyani. Iingcebiso zomculi wobugcisa zibandakanyiwe! I-Hayley Bieber ye-Luminous makeup, efana ne-Hailey's, iyahlaziya kwangoko, iyenze ilungele ishishini elinzima ngeMivulo. Umenzi wobugcisa uKsenia Nikitina ucebisa ukuba afake isicelo kwisiseko sokubola kwe-Urban phantsi komthunzi. “Bawugcina ngokukhuselekileyo umthunzi kangangeeyure ezingama-24. Ndikhetha u-satin… Qhubekeka ukufunda Ukukhetha okungcono kweenkwenkwezi
I-Roman Moiseenko - malunga neempazamo ezithandathu zesitayile ozenzayo
[ad_1] URoman Moiseenko ngomnye wabalungisa iinwele abadumileyo kunye nezitayile eRashiya. Usebenze kwiiprojekthi eziphambili ezinje nge "Star Factory", "People's Artist", wayengumbhexeshi-we-nkqubo "Yikhuphe kwangoko" kwi-STS. URoman uxelele uBeautyHack ukuba uzomise njani kakuhle iinwele zakho, kutheni kufuneka utshintshe ukwahlukana kwaye yintoni… Qhubekeka ukufunda I-Roman Moiseenko - malunga neempazamo ezithandathu zesitayile ozenzayo
ndizenze njani iinwele zam kunye nokuthambisa kwi-salon ye-Art'Up
[ad_1] I-heroine ye-Gume yeprojekthi ye-BeautyHack uKatya uchithe iiyure ezininzi eSalon Art'Up kumaPatriarch's Ponds, apho wafumana khona iinwele ezintsha kwaye engaqhelekanga, kwiimvakalelo zakhe, makeup. U-Stylist u-Eldar Adraev kunye nomlawuli wezobugcisa we-Art'Up we-make-up wegcisa u-Alena Lapina uthetha ngovavanyo lwabo. Ngaphambi kuka-Eldar Adraev oyena stylist siphezulu se-Art'Up… Qhubekeka ukufunda ndizenze njani iinwele zam kunye nokuthambisa kwi-salon ye-Art'Up
Ingcebiso ka-BeautyHack yeVeki: Thatha ibhafu yetyuwa
[ad_1] HDo ungasindisi ixesha lokwenza into enjalo (ngakumbi abahlali be sixeko)! Ukuba uyabanda, udiniwe, uxinekile, uzive ukuba ulusu lome kwaye ludlamkile, usebenza kakhulu kuqeqesho - hlamba kwaye usebenzise ityuwa oyithandayo. Ukusuka kwiingcali kwi-BeautyHack - iindlela ezintandathu eziqinisekisiweyo. Ekuqaleni,… Qhubekeka ukufunda Ingcebiso ka-BeautyHack yeVeki: Thatha ibhafu yetyuwa
ukuqhuba kovavanyo lwenkqubo yokwakha umzimba engenabuhlungu
[ad_1] I-GBeautyHack Master Editor uKarina Andreeva waya kwisalon entle “Millefeuille» eFrunzenskaya, wavavanya ikhosi yeenkqubo zomzimba ezilishumi kwizixhobo ze-Icoon Laser zase-Italiya kwaye wabelana ngeembonakalo zakhe. Andizukuxoka ukuba ndithi phantse wonke umntu wasetyhini namhlanje uphupha ngomfanekiso weetoni kunye nolusu olusempilweni. Umntu othile unethamsanqa ngemfuza,… Qhubekeka ukufunda ukuqhuba kovavanyo lwenkqubo yokwakha umzimba engenabuhlungu
Yikhulise kwangoko! Iinkwenkwezi ezili-10 ezingahambi
[ad_1] Ha umthi awunakho ukuhlaziya kuphela iinwele ezikruqulayo, kodwa ngokubonakalayo utshintshe ubungakanani bobuso. Kwaye ukuba kwimeko yokuqala mancinci amathuba okusilela, kwindawo yesibini yonke into inzima kakhulu. Umzekelo, ii-bangs ezichanekileyo aziyi kulungela abasetyhini abanobuso obunesikwere, ezimfutshane ziya… Qhubekeka ukufunda Yikhulise kwangoko! Iinkwenkwezi ezili-10 ezingahambi
I-33 yeenwele ezithandwayo zokuthatha isigqibo ngaphambi kwe-33
[ad_1] TOcascading haircuts, bangs, mohawks, boxing braids and ponytails - yintoni ongakhange uyizame okwangoku? Uyenza phi: I-HAIRDRYER Dry Bar (iBolshaya Dmitrovka, 16/1, zonke iidilesi zinokujongwa apha) Ixabiso kufakelo ngalunye: iiruble eziyi-1 400. (ukwaluka), iiruble ezingamawaka amabini. (yonke imihla), ii-ruble ezingama-2,000 3,500. ("UBoogie Woogie"). Ibhrawuza neBhari yobuhle (uBolshaya Dmitrovka, 16; Malaya Bronnaya,… Qhubekeka ukufunda I-33 yeenwele ezithandwayo zokuthatha isigqibo ngaphambi kwe-33
Uyayiqonda? Njani ukuba amaqhawekazi TV series ihlelo
[ad_1] UHit uvela kuLuisana Lopilato ovela kwiRebel Spirit kwaye kweziphi iinkqubo zikamabonakude uClaire Danes obekade ecaleni kukaJared Leto? I-BeautyHack ityhila ukuba loluphi ulutsha oludumileyo lwe-90 kunye ne-2000s lwenzayo ngoku. UMischa Barton (Marissa Cooper kuthotho lweTV “OS - Lonely Hearts”) Isiqendu sokuqala kuthotho oludumileyo sakhutshwa… Qhubekeka ukufunda Uyayiqonda? Njani ukuba amaqhawekazi TV series ihlelo
Iimveliso zeethoni ezi-6 ezigqibeleleyo endizithenga ngaphezulu nangaphezulu
[ad_1] I-RAre yandisa ii-pores, ubomvu, izangqa phantsi kwamehlo-iingxaki eziqhelekileyo? Kuthatha umzamo omkhulu kunye nemali ukwenza ithoni efanelekileyo. Ndithetha ngezinto zam endizithandayo kwicandelo "Kude kube yinto yokugqibela." Sofia Vorobyova BeautyHack Umhleli Ukulungisa i-cream cream CC Red, Erborian Inguqu engummangaliso ukusuka kohlaza ukuya kwi-beige… Qhubekeka ukufunda Iimveliso zeethoni ezi-6 ezigqibeleleyo endizithenga ngaphezulu nangaphezulu
Abantu abadumileyo abali-15 abanamashiya agqibeleleyo
[ad_1] NST Imilo ekhethwe kakuhle yamashiya ayenzi nje kuphela ukuba imbonakalo ivuleke ngakumbi, kodwa ikwakha ubungakanani obuchanekileyo bobuso. Kule meko, awona magcisa abalaseleyo ehlabathini acebisa ngokuchasene nokulandela ifashoni. Ngaphandle kwento yokuba amashiya abanzi, azizuku "shiya" i-catwalks zehlabathi, le fomu… Qhubekeka ukufunda Abantu abadumileyo abali-15 abanamashiya agqibeleleyo
I-10 i-Angelina Jolie tattoos ekufuneka uyazi
[ad_1] MHave unabantwana abathandathu kunye noMmeli weZindlu ezilungileyo u-Angelina Jolie ungumthandi weetattoos. I-hieroglyph "yokufa" yayiyeyokuqala ukubonakala emzimbeni womdlali weqonga. Emva kweminyaka embalwa, u-Angie wayilahla, endaweni yayo wabeka umvambo wamaBuddha "u-Tai uthandazela ukukhuselwa." Bonke “ubugcisa” emzimbeni weenkwenkwezi bune… Qhubekeka ukufunda I-10 i-Angelina Jolie tattoos ekufuneka uyazi
zeziphi iinkwenkwezi ezilungele umsebenzi?
[ad_1] V wayeneminyaka emingaphi u-Bella Hadid ukufumana i-rhinoplasty yakhe yokuqala, kwaye leliphi ilizwe uKylie Jenner amzisele imbonakalo entsha? Ukulungiselela iindima ezintsha, iikhontrakthi kunye neeprojekthi zeshishini, iinkwenkwezi zikulungele ukutofa i-Botox engenabungozi kunye notyando olukhulu lweplastiki. UCher Cher uneminyaka engama-72, kwaye isiqingatha sale… Qhubekeka ukufunda zeziphi iinkwenkwezi ezilungele umsebenzi?
Ngubani ongahambi neenwele ezimfutshane
[ad_1] Zdid ufuna ukuhlaziya umfanekiso okanye utshintshe umfanekiso? Thatha ixesha lakho ukwenza izigqibo ezinzima - utshintsho kwinwele alusoloko luhlangabezana nokulindelweyo. Ukuba unqwenela ukunqunyulwa kweenwele ezimfutshane, qala ubone ukuba ngaba le ubude ikulungele na. I-BeautyHack imalunga nokuba ngubani ongathandi iinwele ezimfutshane. Qhubekeka ukufunda Ngubani ongahambi neenwele ezimfutshane
Ngaba awulibali ukuthenga? Iimveliso ezili-10 eziphezulu ezishushu zeveki
[ad_1] Isixhobo esisebenza njenge fan, amanzi aneentyatyambo zobuso, iipatches - abagcini bokufuma kunye nezinye izinto ezintsha zale veki ezifanele ingqalelo yakho. Massager ngokuchasene nemibimbi Massage Umbimbi Remover, MIZUHI esebenzayo, elula, uhlahlo-lwabiwo-konke oku malunga nezixhobo zobuhle zaseJapan ezintsha iMIZUHI, ezinokuthengwa kutshanje e-L'Etoile. Sithethile malunga… Qhubekeka ukufunda Ngaba awulibali ukuthenga? Iimveliso ezili-10 eziphezulu ezishushu zeveki
Polina Gagarina kunye nezinye iinkwenkwezi Russian abaphulukene ubunzima kakhulu
[ad_1] NGOKUNGXOXA, isondlo esifanelekileyo okanye ukutya ngokungqongqo- yintoni encedise uPolina Gagarina, uSvetlana Khodchenkova, uAnastasia Denisova kunye nezinye iinkwenkwezi? UPolina Gagarina Kwi "Star Factory" uPolina khange abonakale ngathi wenza ngoku. Kwaye ayisiyiyo into yokuba emva koko wayengenayo iinwele zokutyikitya kunye neplatinum blonde… Qhubekeka ukufunda Polina Gagarina kunye nezinye iinkwenkwezi Russian abaphulukene ubunzima kakhulu
I-18 ubuhle hacks kwi-trichologist kunye ne-stylist
[ad_1] AND trichologist odumileyo u-Tamara Berechikidze kunye no stylist u-Alexei Nagorskiy bathetha ngendlela yokunyamekela iinwele zakho, isitayile esibhityileyo kunye nesantya somthamo, ngokwendalo ezijiyileyo okanye ezinde ezinzima. Iinwele ezinde ezishinyeneyo uTamara Berechikidze Umgqatswa weNzululwazi yezoNyango, ugqirha wesikhumba, ugqirha wezinto eziphilayo 1) Ukuba uneenwele ezinde nezisindayo, khetha ikama eyenziwe ngomthi nekama entle… Qhubekeka ukufunda I-18 ubuhle hacks kwi-trichologist kunye ne-stylist
Indlela yokuphucula ulusu? I-cosmetic icebisa
[ad_1] U-TAsya Al-Arabi, ugqirha wamazwe ngamazwe we-DIBI Milano e-Russia, uxelele indlela yokukhathalela ulusu ngokufanelekileyo, yintoni isithintelo se-epidermal kwaye nokuba kunokwenzeka ukuphucula ukusebenza kwe-khrimu. U-Asya Al-Arabi Umqeqeshi-cosmetologist weklasi yamanye amazwe i-DIBI Milano eRussia Sixelele ngononophelo olufanelekileyo lolusu: ukuba ukhetha njani… Qhubekeka ukufunda Indlela yokuphucula ulusu? I-cosmetic icebisa
Uyenza banzi njani imilebe ngokuzithambisa: iingcebiso ezivela kubazobi bezinto zokuhombisa
[ad_1] Zithini izinto ezikumlomo, indlela yokwenza isiphumo se-ombre, kunye nendlela yokuzoba ngokuchanekileyo ipensile? Khuhla imilebe yakho emva koko uthambise imilebe emininzi yemilebe kaLisa Eldridge Sebenzisa into yokuthambisa imilebe ngaphambi kokuba uqambe. I-Kiko's Scrub & Peel Wipes ayisusi kuphela amasuntswana esikhumba afileyo,… Qhubekeka ukufunda Uyenza banzi njani imilebe ngokuzithambisa: iingcebiso ezivela kubazobi bezinto zokuhombisa
iimaski ezilungileyo ngezicatshulwa zeziqhamo
[ad_1] I-NSapaya, ivatala, istrawberry, iapile kunye neavokhado ayisiyo iresiphi yesmoothie esempilweni kwaye ingezizo nezithako zesaladi yeziqhamo, kodwa ngabancedisi bobuhle bokwenene kwabo isikhumba sabo sidinga ukubuyiswa kunye ne-hydration. Abahleli beBeautyHack bavavanye ezona maski zintle ngeziqhamo zeziqhamo kwaye bahambisa isigwebo. Ukulinganisa imaski neziqhamo ezifumeneyo Iziqhamo Ukulinganisa ... Qhubekeka ukufunda iimaski ezilungileyo ngezicatshulwa zeziqhamo
Icandelo lesitayile esisecaleni: I-15 yeyona mizekelo yeenkwenkwezi zibalaseleyo
[ad_1] TOTO wasp was parting is able to yokwenza phantse nayiphi na inwele efanelekileyo, kwaye kubanini beenwele ezingcakacileyo ayinakubuyiselwa ndawo. Nantsi eyona mizekelo mihle ye-stellar yeenwele ezahlulwe ecaleni kunye nendlela yokuziphindaphinda kwaye uphephe iimpazamo. I-Wavy bob Icala lokwahlulahlula ngokudibanisa ne-curls eziphakathi-eziphakathi alivumeli ukubetha kuphela… Qhubekeka ukufunda Icandelo lesitayile esisecaleni: I-15 yeyona mizekelo yeenkwenkwezi zibalaseleyo
Ukwenza izimonyo-indlela yokuphinda
[ad_1] Vizagist uChristina Novikova - malunga nendlela (kwaye nokuba kufanelekile) ukwenza ukubhaka ngokwakho kwaye zeziphi iimveliso ezifanelekileyo olo hlobo lwethambiso. UChristina Novikova visagiste Yintoni ebhaka? Ukubhaka, okokuqala, kukwenziwa kweqonga, okusetyenziswa kwiimovie, kwiithiyetha nakwikhaphethi ebomvu. Olo make-up luyathandwa ngu… Qhubekeka ukufunda Ukwenza izimonyo-indlela yokuphinda
Sukuphinda! I-25 yeentlobo zeenwele zabantu abadumileyo ngalo lonke ixesha
[ad_1] U-DJennifer Lopez weza kwii-Oscars zika-2002 nge-trapeze, kwaye uKristen Stewart wayecaphukisa abafoti nabagxeki ngezinwele zakhe ezihlekisayo. I-BeautyHack yayonwabe kakhulu ngokuxoxa ngokusilela kweenkwenkwezi kunye nesitayile esiphezulu u-Ivan Anisimov. U-Ivan Anisimov umphezulu we-stylist ye-arhente yoonozakuzaku we-Jennifer Lopez Ekuqaleni ndacinga ukuba umfanekiso ngu… Qhubekeka ukufunda Sukuphinda! I-25 yeentlobo zeenwele zabantu abadumileyo ngalo lonke ixesha
Ezili-10 eziphambili eziphambili ezivela kuthotho lweTV
[ad_1] TOovarious Maiza ovela kuthotho lweTV "Clone", u-Esmeralda ohanahanisayo ovela "kwi-Dream Coast" kunye ne-8 yeendima ezingalibalekiyo zabenzi bobubi. UDaniela Escobar (Maiza). Uthotho "Clone" Indima kaMaiza ongenamaqhinga kwaye engonwabanga ngumsebenzi wokuqala omkhulu weqonga lomlingisi uDaniela Escobar. Umlinganiswa wajika wangumbono:… Qhubekeka ukufunda Ezili-10 eziphambili eziphambili ezivela kuthotho lweTV
Batshintshe njani abadlali be-Cruel Intentions
[ad_1] kwiminyaka engamashumi amabini eyadlulayo, nge-5 ka-Matshi 1999, ikopi yesine kunye neyona ithandwa kakhulu kwifilimu yenoveli ethi "Diaous Liaisons" ebhalwe nguChoderlos de Laclos. Intshukumo yafuduka kwinkulungwane ye-18 yaya kwi-20, kwaye endaweni yeFrance, kwavela izikrini eNew York entle. Ngelixa uceba ukubukela kwakhona iiNjongo eziKhohlakeleyo, iBeautyHack… Qhubekeka ukufunda Batshintshe njani abadlali be-Cruel Intentions
Ungalukhathalela njani ulusu lwakho entwasahlobo: ingcebiso evela kugqirha wesikhumba
[ad_1] Unonophelo olugqibeleleyo kunye nokusetyenziswa kweemveliso ezithandekayo ngexesha elibandayo akuqinisekisi ukuba ulusu luza kubonakala lungenasiphako ngokuqala kobushushu. Zeziphi iimfihlo zobuhle eziza kunceda ekunyamekeleni iintlobo ezahlukeneyo zolusu kunye nendlela yokukhetha imveliso egqibeleleyo? Iimpendulo zale mibuzo sele zifunyenwe… Qhubekeka ukufunda Ungalukhathalela njani ulusu lwakho entwasahlobo: ingcebiso evela kugqirha wesikhumba
Iinkwenkwezi ezingama-20 ezingavaniyo nezinye
[ad_1] WITHShackles, ubuqili, uphando eHollywood aziqhelekanga. Ukukhethwa kwe-BeautyHack kubandakanya iinkwenkwezi ezingama-20 ezingenakulindeleka ukuba zifumane ulwimi olufanayo. UMadonna vs Gwyneth Paltrow Umlingisi ophumelele u-Oscar kunye nokumkanikazi we pop uqhele ukuthetha ngaye njengabahlobo abafungisiweyo. UMadonna noGwyneth babenobudlelwane obufudumeleyo ixesha elide, bade babiza… Qhubekeka ukufunda Iinkwenkwezi ezingama-20 ezingavaniyo nezinye
Iimemes ezingama-30 zobuhle obuhle
[ad_1] iimemes zobuhle ezingamashumi amathathu [ad_30]
Abafazi abali-10 abahle kakhulu bakaMongameli ngalo lonke ixesha
[ad_1] Ukusuka kubafazi baseFrance uBrigitte Macron ukuya kwabafazi bokuqala baseAzerbaijan naseCote d'Ivoire. UMelania trump Into yokugqibela yodliwanondlebe engekho kwisikhundla senenekazi lokuqala, uMelania wanika ngo-2016 kwi-American GQ. Emva koko inkwenkwezi ngendlela yokwabelana yabelana ngeendaba zobomi kwaye "yazama" indima ye… Qhubekeka ukufunda Abafazi abali-10 abahle kakhulu bakaMongameli ngalo lonke ixesha
Iziseko ezi-5 ezinkulu zolusu olomileyo
[ad_1] Isilungisi se-on-line esisekwe kumanzi eentyatyambo e-lotus, i-BB cream enononophelo olukhulu kunye nezinye izinto ezifunyanisiweyo kulusu olomileyo - kwinqaku elitsha ngumhleli oyintloko we-BeautyHack Karina Andreeva @ kandreevaa… UKarina Andreeva oyiNtloko Umhleli we-BeautyHack ndinolusu oluthanda ukoma, ngoko ke ndisondela kukhetho lwesiseko… Qhubekeka ukufunda Iziseko ezi-5 ezinkulu zolusu olomileyo
Amashiya eFairy: uyenza njani imilo igqibelele
[ad_1] Umculi we-Vand ongumculi uKelly Baker usebenze e-Hollywood iminyaka eli-17, apho intombazana ibizwa ngokufanelekileyo ngokuba "yintsomi yamashiya." Uluhlu lwabathengi bakhe luquka yonke indlu kaKardashian-Jenner, uShay Mitchell, uCardi B, uZendaya, uAriana Grande, abadlali beMidlalo yeTrone kunye nezinye iinkwenkwezi. V Instagram Ubomi bukaKelly bu… Qhubekeka ukufunda Amashiya eFairy: uyenza njani imilo igqibelele
Wowu! Njani namhlanje abadlali abadlala abantwana kolu thotho TV eBrazil?
[ad_1] V Kwiminyaka yee-1990, into entsha eyithandayo yabonakala kubomi bosapho "lwasemva kweSoviet" -bukela uthotho lweTV. Kula maxesha akude kangako, iidiski zazinqabile - ukufumanisa ukuba izakuphela njani i-telenovela, qho ngokuhlwa kwakufuneka ubeke yonke into phantsi kwaye uhlale kwiscreen. Amaqhawe… Qhubekeka ukufunda Wowu! Njani namhlanje abadlali abadlala abantwana kolu thotho TV eBrazil?
Ndivavanye njani iAchromin iiveki ezimbini
[ad_1] NSRKhumbula i-cream emhlophe emhlophe epinki kunye nokupakisha kwe-beige, enokubonwa kwigumbi lokuhlambela layo nayiphi na indlu yaseSoviet nasemva kweSoviet? Ukusukela ngoko, uphawu luphucule ukwenziwa kwalo, lwenziwa ngokutsha kwaye lwavela kwiishelufa zevenkile kuhlobo oluhlaziyiweyo (ngaphakathi nangaphandle). Umhleli we-BeautyHack u-Yulia Kozoliy uyeke indlela yakhe yesiqhelo… Qhubekeka ukufunda Ndivavanye njani iAchromin iiveki ezimbini
iinkwenkwezi zasihlekisa njani ngomhla wokuqala ku-Epreli?
[ad_1] Ukususela ekukhulelweni ngaphambi koqhawulo-mtshato: i-BeautyHack - malunga neziqhulo zayizolo zeenkwenkwezi, esaphantse sakholwa kuzo. UJustin Bieber Izolo isibini saseBieber sabelane ngeendaba ezimnandi- uHaley ulindele umntwana. Njengobungqina, uJustin uthumele iskena se-ultrasound esibelekweni: umntu ungxamile waya kuvuyisana nesi sibini, abanye bathandabuza - yintoni enokwenzeka… Qhubekeka ukufunda iinkwenkwezi zasihlekisa njani ngomhla wokuqala ku-Epreli?
U-Miss World ngekamva elinomdla
[ad_1] 8 Nkosazana yeHlabathi kunye nekamva elinomdla [ad_2]
Iimpazamo ze-6 ozenzayo
[ad_1] UKUXHAPHAZA kweemveliso zesimbo kunokukhokelela entwenini, indlela yokukhetha ikama efanelekileyo yesitayile kwaye kutheni iinwele kufuneka zivunyelwe zipholile? I-WELLA Ingcali kuZwelonke u-Igor Kimyashov - malunga neempazamo eziqhelekileyo ozenzayo xa uthambisa iinwele zakho. Igor Kimyashov Ingcali yelizwe WELLA Impazamo # 1:… Qhubekeka ukufunda Iimpazamo ze-6 ozenzayo
Iinkwenkwezi ezili-10 ezathi zaduma zisengumntwana
[ad_1] V Yeyiphi ifilimu edlalwe nguAngelina Jolie eneminyaka eyi-6, uDrew Barrymore wayifumana njani indima yakhe yokuqala eneminyaka elishumi elinanye (11) kwaye yeyiphi ifilimu edumileyo ongayibona uElijah Wood omncinci? Kukhetho olukhethekileyo lwe-BeautyHack, kukho iinkwenkwezi ezivele kumabonwakude njengomntwana. Qhubekeka ukufunda Iinkwenkwezi ezili-10 ezathi zaduma zisengumntwana
Akukho ngxaki? Ezona zibini zintle kakhulu zinomahluko omkhulu wobudala
[ad_1] R Umahluko kwiminyaka eli-10, engama-20 kwaye nakwikota yenkulungwane awuzikhathazi ezi nkwenkwezi-zingqina ngomzekelo wazo ukuba akukho zithintelo kuthando lwenene. KwiBeautyHack kukho izibini ezilishumi ezithandekayo zeenkwenkwezi ekudala zingangumqobo kuye. UNick Jonas kunye no-Priyanka Chopra… Qhubekeka ukufunda Akukho ngxaki? Ezona zibini zintle kakhulu zinomahluko omkhulu wobudala
indlela esize ngayo kwenye yezona ndlela zisebenzayo zokususa iinwele
[ad_1] I-NSWinter, i-laser, i-ultrasonic, ifoto-, i-electro-… Kwinkulungwane yama-21, igama elithi "ukuxiliswa" linokwahluka okuninzi, kwaye sineendlela ezininzi zokususa iinwele. Ngoku inokwenziwa nasekhaya, kwaye ngaphandle kwentlungu, ukusabela kolusu kunye nezinye iingxaki, kwaye okona kubaluleke kakhulu: liphupha lawo onke amantombazana - ukuphelisa… Qhubekeka ukufunda indlela esize ngayo kwenye yezona ndlela zisebenzayo zokususa iinwele
Iinkwenkwezi ezili-10 ezixhamle kuqhaqho lweplastiki
[ad_1] U-Bella Hadid, u-Megan Fox kunye no-Blake Lovely zange babhengeza esidlangalaleni ngotyando lweplastiki. Kodwa kuyaziwa ukuba umsebenzi wamantombazana unyuke emva kotshintsho olukhulu kwimbonakalo. Ngubani omnye omele athi "enkosi" kugqirha wotyando-kwinto ethi BeautyHack! UMegan Fox Megan Fox uyalukhanyela naluphi na utyando lweplastiki nokunye ... Qhubekeka ukufunda Iinkwenkwezi ezili-10 ezixhamle kuqhaqho lweplastiki
UMaria Ginzburg kunye noRasida Lakoba-malunga neprojekthi entsha i-The-Face-Only
[ad_1] NSW Kutheni uqala ngokundwendwela ubuhle kodwa ungalifumani ixesha? Okanye uyoyika oogqirha kwiidyasi zelebhu kunye nenaliti? Bopha uloyiko lwakho: iprojekthi entsha Ubuso-obenzelwe ubuso kuphela benzelwe wena-abo bafuna ukukhathalela ulusu kunye nokugcina ixesha labo. Ifomathi ezivelelayo-ayithethi iinkqubo ezenzakalisayo okanye… Qhubekeka ukufunda UMaria Ginzburg kunye noRasida Lakoba-malunga neprojekthi entsha i-The-Face-Only
Iindlela ezi-5 zobuhle ezivela kwiVeki yeFashoni yaseMoscow esizithandayo
[ad_1] IVeki yeMercedes-Benz yeFashoni iRussia ihlala ilandela iiveki eziphambili zefashoni eNew York, eLondon, eMilan naseParis. Kulo nyaka, abayili beYulia kunye no-Alisa Ruban, u-Alena Akhmadullina, no-Alexander Arutyunov baya kumsitho wefashoni. Satsalela ingqalelo kwiimpawu zobuhle behlabathi, eziye zaqhelaniswa kakuhle kwiitrato zaseMoscow. Isiphumo seenwele ezifumileyo Esinye se… Qhubekeka ukufunda Iindlela ezi-5 zobuhle ezivela kwiVeki yeFashoni yaseMoscow esizithandayo
Kwenzeka ntoni kubathathi-nxaxheba kwimiboniso yokuqala yokwenyani yaseRussia
[ad_1] V Ekuqaleni kweminyaka yama-2000, ifomathi entsha yavela kumabonwakude waseRussia - umboniso wenene. Rhoqo, izigidi zababukeli beTV ziye zalahla yonke into ngenxa yento entsha ethi "Emva kweglasi" okanye "Iqhawe lokugqibela". Kwenzeka ntoni kwiinkwenkwezi zikamabonwakude, ezakha uthando kwi… Qhubekeka ukufunda Kwenzeka ntoni kubathathi-nxaxheba kwimiboniso yokuqala yokwenyani yaseRussia
[ad_1] Iaramu yokwahlulahlula, ioyile yokuhamba, ukutshiza kwemilenze ediniweyo kunye nokunye kule ngqokelela yeemveliso ezintsha. Ioyile yeenwele iTahiti Monoi, Alan Hadash Uphawu luka-Alan Khadash, oludibanisa izithethe zakwa-Israyeli kunye neetekhnoloji zale mihla zaseJamani, zavela eRashiya kungekudala, ngenxa yoko sifuna ukukhumbuza malunga nokuqokelelwa kwe… Qhubekeka ukufunda Ngaba awulibali ukuthenga? Iimveliso ezili-10 eziphezulu ezishushu zeveki
Ukukhethwa kwabaHleli: I-10 ephezulu yeenkungu kunye ne-Sprays yobuso
[ad_1] IVesna! Oku kuthetha ukuba ixesha loburhabaxa nobunzima liphelile. Ukufafaza kunye nenkungu yomoya zilandelayo emgceni. Abahleli beBeautyHack bavavanye "abahlobo abalungileyo" kulusu olunamanzi. Isithambiso sokuthambisa i-Glacial Spray Lotion, i-Skyn Iceland Ivavanywe ngumhleli ophezulu u-BeautyHack Anastasia Speranskaya Ingqwalaselo, ingqalelo, abahlali base megalopolises (hayi kuphela)! NONE Qhubekeka ukufunda Ukukhethwa kwabaHleli: I-10 ephezulu yeenkungu kunye ne-Sprays yobuso
Ukukhetha kweenkwenkwezi: Iziqholo eziphezulu ezili-12
[ad_1] UHatalya Vodianova, u-Angelica Timanina, uMaria Ivakova kunye nezinye iinkwenkwezi-malunga namavumba athandana nawo iminyaka emininzi! Ukukhethwa komsasazi kamabonakude uMaria Ivakova: Umzobo weLinenekazi, uFrederic Malle Ndithathela ingqalelo imfudumalo eshushu yeLady kaFrederic Malle njengevumba lam lokutyikitya - ndine… Qhubekeka ukufunda Ukukhetha kweenkwenkwezi: Iziqholo eziphezulu ezili-12
Iingcaphuno ezihlekisayo ezivela kuthotho lweTV ye-90s
[ad_1] V Kuma-90s okuqala, ukubukela iinkqubo ze-TV ngorhatya yayilisiko kusapho ngalunye. Abanye babo banyanzelwa ukuba bakhale kwaye bavelane namagorha, kwaye abanye bahleke, befumana "isahlulo" se-endorphins egazini. Kwaye ukusukela oko ukuhleka kusandisa ixesha lobomi, i-BeautyHack ihlanganise ezona zicatshulwa zibalaseleyo… Qhubekeka ukufunda Iingcaphuno ezihlekisayo ezivela kuthotho lweTV ye-90s
Iingcamango ze-12 ze-manicure kumthunzi ophambili we-2019
[ad_1] I-TOOral Living Coral enenombolo ye-16-1546 ngowona mbala uphambili we-2019 ngokwePantone Colour Institute. Emva kwemathiriyeli malunga neemveliso zobuhle kumthunzi oqaqambileyo othembekileyo, sipapasha ukhetho lweemanicure kunye nee salon, apho nganye yazo inokuphindwa ngokulula! Uyenza phi:: Isaluni yoBume bohlobo lweNdawo yoBuhleIdilesi: EMoscow, eSmolensky yokuqala nge.,… Qhubekeka ukufunda Iingcamango ze-12 ze-manicure kumthunzi ophambili we-2019
Iindlela ezi-7 zomtshato ezenziwa ngabatshati ngo-2019
[ad_1] Igcisa lokuzenzela elizimeleyo u-Yulia Kupriy (@kupryimakeup) uxelele ukuba zeziphi iintolo ezifanelekileyo kweli xesha lomtshato, kutheni wonke umtshakazi kufuneka abe nesigqabi somlomo kunye nepinki yomlomo esikhwameni sakhe. UJulia Kupriy Umzobi weempawu ezizimeleyo "Sele namhlanje, abatshakazi bexesha elizayo bajonge kwiimagazini bekhangela ubume babo obugqibeleleyo bomtshato. Imibala ye-pastel shades kunye ne-matte textures… Qhubekeka ukufunda Iindlela ezi-7 zomtshato ezenziwa ngabatshati ngo-2019
Kwenzeka ntoni kubo? Amahla ndinyuka ama-Actresses aseBrazil
[ad_1] V 90s TV yaseBrazil uthotho zazikwincopho yokuthandwa kwazo. Abo bangenamdla koko kwenziwa ngabadlali abadumileyo kangangeminyaka eli-15 baya konwaba: bangena kwizivumelwano zentengiso ezizigidi ngezigidi, banabantwana kwaye bayaqhubeka nokudlala. Zili-XNUMX iinkwenkwezi zikamabonakude ezinobomi obunomdla kakhulu kwi-BeautyHack… Qhubekeka ukufunda Kwenzeka ntoni kubo? Amahla ndinyuka ama-Actresses aseBrazil
Iimodeli ezi-6 ezishelfini ezitshintshe ishishini
[ad_1] I-EU ikude kweyona ndlela yodwa yokuma kushishino lwefashoni. Kukho imizekelo xa, xa uqweqwe lweAmerican Vogue, iimodeli zisuka emhlabeni zineengxaki ezinzulu njengobuhlanga. Malunga amantombazana amathandathu akhaliphileyo ngenkangeleko engaqhelekanga - kwizixhobo zeBuhleHack. UBeverly Johnson Beverly yenye… Qhubekeka ukufunda Iimodeli ezi-6 ezishelfini ezitshintshe ishishini
I-5 yomzimba owuthandayo kunye neenwele zentwasahlobo
[ad_1] I-VSpring eMoscow yahluke ngokupheleleyo kwaye ayinakulindeleka: nokuba kushushu ngokukhawuleza ngesiquphe okungenani i-10, imozulu efudumeleyo (eshushu nkqu nebhatyi yesikhumba) kunye nelanga eliqaqambileyo, okanye ngekhephu elibukhali kunye nokususa ithemometha Umhala olandelayo. Ukuze imood yakho ingaxhumi, njengemozulu,… Qhubekeka ukufunda I-5 yomzimba owuthandayo kunye neenwele zentwasahlobo
Iinkwenkwezi ezili-10 ezitshintshe amanani azo ngaphaya kokuqondwa
[ad_1] INDLELA uJessica Simpson ayilahla ngayo i-30 kg, yintoni imfihlelo yokuvumelana kukaVictoria Lopyreva kwaye yintoni eyamncedayo uPolina Gagarina ukunciphisa umzimba? Abantu abadumileyo abathe batshintsha amanani abo ngaphaya kokuqwalaselwa bakwiqoqo le-BeautyHack. Ukuphakama kukaJessica Cypson uJessica yi-161 cm, ubunzima obuqhelekileyo ngama-55 kg. USimpson uthambekele ekutyebeni kakhulu kwaye ufumene… Qhubekeka ukufunda Iinkwenkwezi ezili-10 ezitshintshe amanani azo ngaphaya kokuqondwa
Ngenyameko! I-22 yeenkwenkwezi zeenwele ezonakalisa iinwele zakho
[ad_1] YINTONI iinwele kunye nesimbo ezingafanelekanga ukwenziwa yonke imihla? Ukujongana nee-stylists. Artak Hayrapetyan, stylist e-Beauty Stop26: 1. I-Combs Umgaqo wokudibanisa kukuthambisa ngabom iinwele zevolumu. Kodwa ngenxa yoku, ulwakhiwo lomgangatho weenwele luyaphazamiseka: izikali zahluliwe enye kwenye, njengo… Qhubekeka ukufunda Ngenyameko! I-22 yeenkwenkwezi zeenwele ezonakalisa iinwele zakho
Iinkwenkwezi ezingama-20 ezingazange zisilele ngobuhle
[ad_1] Zeziphi iimveliso ezenziwa ziinkwenkwezi ukwenza isitayile esifanelekileyo kunye nendlela yokuphinda ukwenziwa kukaNatasha Poly kwikhaphethi ebomvu? Inxalenye yesibini yemathiriyeli imalunga namantombazana angenazo iziliphu zobuhle. Funda ikhonkco lokuqala. Iakhawunti esemthethweni ka-Sienna Miller Sienna inefoto enye kuphela, kodwa kukho ezinye iiprofayili ngokupheleleyo… Qhubekeka ukufunda Iinkwenkwezi ezingama-20 ezingazange zisilele ngobuhle
20 eyona mqamelo ilungele intwasahlobo
[ad_1] TOHUlufumana njani olona khuselo lulula kwaye ngowuphi umqamelo ogqume phantsi kwesangqa samehlo kunye neminye imiqondiso yokudinwa? Abenzi bobugcisa kunye neebhlogi bathetha ngezixhobo abazisebenzisayo emsebenzini nakubomi. UVictoria Moiseeva ongumzobi wegcisa elizimeleyo, ibhlog ye-Cushion Air Fit, i-A'pieu Ukuhamba kwee-cushons kuqale ngolu hlobo, kwaye ngalo mzuzu… Qhubekeka ukufunda 20 eyona mqamelo ilungele intwasahlobo
I-20 ye-lipstick shades yeeblondes
[ad_1] UVizazhist Evgenia Rusinovskaya uxelele indlela yokufumana umthunzi ogqwesileyo we-lipstick, kwaye wabelana ngeemveliso zakhe azithandayo kwii-blondes. Evgeniya Rusinovskaya Visagiste Xa ukhetha umbala we-lipstick, qhubeka ngohlobo lombala (oshushu okanye obandayo) kunye nomthunzi weenwele. Imibala eshushu ifanele amantombazana ane-blond efudumeleyo; ezibandayo, ze… Qhubekeka ukufunda I-20 ye-lipstick shades yeeblondes
Iinwele ze-12 zika-Angelina Jolie ezilungela wonke umntu
[ad_1] UBeautyHack ukhethe iinwele ezilula neziguqukayo zenkwenkwezi kwaye wacela u-stylist u-Anna Portkova ukuba aphawule ngazo. U-Anna Portkova I-Trichologist-consultant Bundles, ivolumu kwisithsaba, ukwahlula okwehliswayo, iinwele ezibuyileyo, ii-bangs - I-stylists zika-Angelina zinamaqhinga alula! Konke oku kunokwenziwa ekhaya, okoko unokufana… Qhubekeka ukufunda Iinwele ze-12 zika-Angelina Jolie ezilungela wonke umntu
I-sauna ye-infrared: izibonelelo kunye nokwenzakala
[ad_1] VUngasebenzisa i-sauna ye-infrared kwiziko langoku lokuzilolonga okanye igumbi lokuhomba - iyathandwa phakathi kwabantu abajonga ubuhle kunye nempilo. Amaza e-infrared anefuthe elihle, elingena nzulu emzimbeni, lifudumeze. Akukho ukufuma emnqubeni, owonyusa ukubila kunye nokususa ityhefu ... Qhubekeka ukufunda I-sauna ye-infrared: izibonelelo kunye nokwenzakala
Zine ii-salon ezintsha zokundwendwela
[ad_1] Isithuba sobuhle, apho wonke umntu esazi ngenkathalo yolusu ebusweni, kwiprojekthi entsha ye-stylist ephezulu u-Yegor Ryabushko. I-Face-Only yenziwa ngamantombazana amabini axakeke kakhulu: umyili weRasario uphawu lweRasida Lakoba kunye nomsunguli we-Wax & Go salon chain uMaria Ginzburg. Banabantwana abasixhenxe babini. Ke ngoko,… Qhubekeka ukufunda Zine ii-salon ezintsha zokundwendwela
Ukuqaqamba ngokulula: uphononongo lweemveliso ezibengezelayo
[ad_1] Abahleli beRBeautyHack bavavanya ezona zimnyama zigqwesileyo, iimbalasane, umgubo kunye nezinto ezibengezelayo ngokukhanya okuthe-ethe nokubengezela okubonakalayo emajukujukwini. Ukuqaqambisa ulusu ukuKhanya okuKhazimla kweGlaze Stick, u-Becca Ukukhetha umhleli ophezulu we-BeautyHack Anastasia Speranskaya Ngo-Matshi, u-Becca ubonise ingqokelela entsha, Uthando lweSikhumba, olubandakanya iimveliso ezinombhalo we-eco-friendly. Inayo yonke into… Qhubekeka ukufunda Ukuqaqamba ngokulula: uphononongo lweemveliso ezibengezelayo
Ndizame njani inkqubo yeDermadrop
[ad_1] KUNYE nomhleli ophezulu we-BeautyHack waya kwikliniki ye-cosmetology entsha ye-Gen87ukuvavanya inkqubo ye-Dermadrop. Ngubani ofanelekileyo kwaye unokuthathwa njenge-analogue engenantlungu ye-biorevitalization? Anastasia Speranskaya Umhleli oMkhulu uBeautyHack Ilanga liyatshisa, kuvuthuza umoya, iibhetri ziyoma - ayilulo lonke ulusu olunako… Qhubekeka ukufunda Ndizame njani inkqubo yeDermadrop
Izinketho ze-manicure ezingama-30 kwabo bangabuthandiyo ubugcisa besikhonkwane
[ad_1] Ococekile enombala osezantsi idiniwe, kodwa awukulungelanga ukuzoba iSistine Chapel kwizikhonkwane zakho - ingaba iqhelekile? I-BeautyHack iqokelele ubugcisa bezikhonkwane kubathandi be-minimalism kwaye baxelelwa ukuba zeziphi iisalon eMoscow ezinokuphindwa. Bonisa nje inkosi! Uyenza phi: Uhlobo lwesaluni yohlobo lobuhle… Qhubekeka ukufunda Izinketho ze-manicure ezingama-30 kwabo bangabuthandiyo ubugcisa besikhonkwane
Ukukrola iinwele: iingenelo kunye nobubi
[ad_1] Ngaba ukuthatha kwakho isitayile semihla ngemihla kuyakutya? Yenze ihlale ixesha elide ngokucheba iinwele. Inkqubo ilungisa ivolumu kunye nee curls zisebenzisa ukwakheka okhethekileyo, izitayile okanye izandi. Ipemethe iza kuhlala iiveki ezintathu ukuya kwezisibhozo! I-BeautyHack-malunga neenzuzo kunye neengozi zokukrola iinwele. Yintoni ukukrola iinwele? Ukukrola kukudala… Qhubekeka ukufunda Ukukrola iinwele: iingenelo kunye nobubi
Indlela yokuphelisa ngokukhawuleza umkhuhlane emilebeni: icebisa ugqirha wesikhumba
[ad_1] HL Masiqale ngeendaba ezidanisayo: yi-4% kuphela yabemi behlabathi abangayithwaliyo intsholongwane yeherpes. Kwaye amathuba okuba ungohlukileyo, hayi umthetho, awanakwa. Umzekelo, lo mbuzo wokuphelisa ukubanda emilebeni unokusebenza nanini na. UDermato-cosmetologist uViktoria Britko uxelele… Qhubekeka ukufunda Indlela yokuphelisa ngokukhawuleza umkhuhlane emilebeni: icebisa ugqirha wesikhumba
ukuba ikhangeleka njani kwaye ungayiphinda phi eMoscow
[ad_1] Ushicilelo oludlamkileyo, imibala eqaqambileyo isetyenziswe ngabom ngokungakhathali, ukurabha kunye nokuhamba ze oku-classic kunye nezinto zemizobo - abenzi beemanicurists kwimiboniso yefashoni basebenzise zonke iindlela zokwenza ingqalelo kwiikhonkwane zeemodeli. Konke oku kunokuphindaphindwa ngoku kwiisalon zaseMoscow - izimvo kunye needilesi eziluncedo kwizinto zeBeautyHack! Imibala engqombela Ku… Qhubekeka ukufunda ukuba ikhangeleka njani kwaye ungayiphinda phi eMoscow
Iimveliso zobuso ezi-5 ndizisebenzise ngokupheleleyo
[ad_1] Umhleli weRBeautyHack uYulia Kozoliy - malunga nezithambiso, iimaski kunye neemulsions zobuso ezilingana kakuhle kwaye, ubuncinci, zifanelwe kukuqwalaselwa. Ikhrimu yokuthambisa iBotanical Kinetics Hydrating Soft Crème, iAveda andizithathi njengomnye wabalandeli abathembekileyo beAveda - ayizizo zonke iimveliso ezifanelekileyo kum, kwaye eyam… Qhubekeka ukufunda Iimveliso zobuso ezi-5 ndizisebenzise ngokupheleleyo
konke malunga notyando lweplastiki eKorea
[ad_1] TOOreian zeplastiki zotyando zithathwa njengezona zinamava kakhulu kwihlabathi. Ngokwezibalo, umfazi ngamnye wesihlanu waseAsia uye wahlinzwa ubuncinci. Ukubeka i-aesthetics kumgca wendibano, iingcali zaseKorea zigqibelele izakhono zazo, zadumisa yonke intshukumo. Ukuza kuthi ga ngoku, iKorea yenze eyona misebenzi iphambili kwihlabathi. Ukhenketho kwezonyango… Qhubekeka ukufunda konke malunga notyando lweplastiki eKorea
Uluchaza njani uhlobo lombala wakho kwaye ngaba luyimfuneko?
[ad_1] I-TOcolourist kunye ne-make-up yegcisa- malunga nokuba loluphi uhlobo lombala elinalo ngoku kwaye kutheni ungafanele uxhomekeke ngokupheleleyo kolu phawu xa ukhetha izinto zokuthambisa okanye ufuna ukutshintsha umbala weenwele zakho. UChristina Novikova umculi wezinto zokuhombisa, umyili weSikolo seNovikova Studio sokwenza izithambiso Ngoku ulwahlulo lwenkangeleko ngokweendidi zemibala lubonakala… Qhubekeka ukufunda Uluchaza njani uhlobo lombala wakho kwaye ngaba luyimfuneko?
Zeziphi iibhlog ezithetha ngazo: Nastya Swan
[ad_1] I-Mdress kunye ne-blogger u-Nastya Swan - malunga namasiko emihla ngemihla yobuhle, ukuvumelana kwangaphakathi nesiqu sakho, isondlo kunye nemidlalo. Malunga nempilo yengqondo Ukuvelisa, kubaluleke kakhulu ukugcina ulungelelwano, ulungelelwaniso lwangaphakathi kunye nokugcina iingcinga zakho zilungile. Izenzo zokomoya, ukusebenza nesayikholojisti kunye nonxibelelwano nesiqu sam ngaphakathi kundinceda ukuba… Qhubekeka ukufunda Zeziphi iibhlog ezithetha ngazo: Nastya Swan
I-11 yabasasazi abahle kakhulu kwiminyaka engama-20
[ad_1] U-Othey angazenzela lula ukuba ngumzekelo wobugcisa obubi kakhulu kunalowo kaCindy Crawford, kodwa bakhetha istudiyo sikamabonakude kunekati. U-Ekaterina Andreeva, u-Mona Abu Hamze kunye nabasasazi abangama-9 abahle ngakumbi kule minyaka ingama-20 idlulileyo. U-Ekaterina Andreeva Ujonge ku-Catherine, kubonakala ngathi ipilisi yokwaluphala yayiseyiyo… Qhubekeka ukufunda I-11 yabasasazi abahle kakhulu kwiminyaka engama-20
I-10 yemiboniso bhanyabhanya yaseBrazil ebalaseleyo yobuntwana bakho
[ad_1] V Ngo-1988, uthotho lokuqala lwe-TV yaseBrazil "Ikhoboka u-Izaura" laboniswa kwi-USSR. Ibali lothando likaIzaura dos Santos noLeoncio Almeida lilandelwe lilizwe lonke elikhulu. Kwii-80s zakudala, uSusana Vieira, uVera Fischer, u-Antonio Fagundes kunye nabanye abadlali abadumileyo baba "ngamalungu" phantse kuzo zonke iintsapho kwi… Qhubekeka ukufunda I-10 yemiboniso bhanyabhanya yaseBrazil ebalaseleyo yobuntwana bakho
Iimveliso ezi-5 zethoni engenasiphako kunye noogxa bazo
[ad_1] RAnastasia Speranskaya, umhleli ophezulu we-BeautyHack, uvavanye i-primer egudileyo, isiseko esinefuthe eliqaqambileyo, isigcini esifana negolide engamanzi, kunye nezinye iimveliso zesikhumba esifanelekileyo kulo naluphi na uhlahlo-lwabiwo mali. Isiseko sePrimer sokwenza i-Touche Éclat Blur Primer, iYves Saint Laurent Khumbula isiphumo esigudileyo kwinkqubo ethandwayo yokuhlela iifoto? Ngale primer… Qhubekeka ukufunda Iimveliso ezi-5 zethoni engenasiphako kunye noogxa bazo
isiqhumiso esifanelekileyo kwifomathi yesayizi yokuhamba
[ad_1] IArum, eyakhelwe ngumahluko omkhulu phakathi kwelekese yomqhaphu kunye nepatchouli, into elula kodwa esebenzayo ene-viscous spruce resin kunye nethontsi lejusi yeorenji kunye nezinye izivumba ezilungele ukuthatha nawe xa usiya eholideyini - jonga kukhetho olutsha lwe Umgxeki weziqholo uKsenia Golovanova. I-eau de parfum Bergamote &… Qhubekeka ukufunda isiqhumiso esifanelekileyo kwifomathi yesayizi yokuhamba
9 iimaski zobuso ezingaqhelekanga
[ad_1] Abahlaziyi beBeautyHack bachitha usuku benxibe ezona maki zobuso zimnandi, aziqhelekanga kwaye zinomdla. Sixelela ngokubonakala kwethu-ngubani oyifunayo kwaye ngoba? Amacandelo amabini e-bubble mask yokucoceka kunye nokondla ulusu Double Dare, OMG! Iimaski zaseKorea I-OMG yesibini! Iibhlog ziyayithanda - ngenxa yokupakishwa okumangalisayo kunye nenenekazi "elinophawu" ... Qhubekeka ukufunda 9 iimaski zobuso ezingaqhelekanga
Amakha ali-15 wonke umntu aphupha ngawo
[ad_1] L Iziqholo ezithandwayo kunye nezinto ezinqabileyo zeziqholo ezikhethiweyo, ezivela kuyo iintyatyambo emphefumlweni, zikwiqoqo elikhethekileyo le-BeautyHack. Eau de parfum Rose Oud, Korloff Paris AmaFrentshi athi: "Ukunika uKorloff kukuvuma uthando lwakho." Kwaye akunamsebenzi ukuba kuthethwa ntoni, isiqwenga sezacholo ngokusasazeka kwe… Qhubekeka ukufunda Amakha ali-15 wonke umntu aphupha ngawo
Sithetha kwaye siyabonisa: Iincwadana ezili-15 zobuhle ngo-Epreli
[ad_1] Siyathetha kwaye siyabonisa: Iincwadana ezili-15 zobuhle ngo-Epreli [ad_2]
iinkwenkwezi ezazingu "crumpets" ebuntwaneni
[ad_1] V ebuntwaneni, ezi "pyshechki" zidumileyo zivuse uthando phakathi kwabanye: oh, ezo zidlele zibomvu. Bakuba bekhulile, bagqiba kwelokuba yayilixesha lokususa "iifolokhwe" kwaye ziguquke zibe zintle kakhulu. Abantu abadumileyo ababekrelekrele ebuntwaneni babo - kwindibano ye-BeautyHack. UJennifer Goodwin Abaphulaphuli bathandana necutie… Qhubekeka ukufunda iinkwenkwezi ezazingu "crumpets" ebuntwaneni
Abona bafazi bahle kwezopolitiko
[ad_1] Ukusuka kweyona ntokazi inkulu edumileyo yaku Mbindi Mpuma ukuya kwelona bhinqa libalaseleyo kwesekela laseBrazil. Kwinqaku le-BeautyHack-uKumkanikazi uRania, u-Ivanka, uMelania Trump kunye namanenekazi ali-12 enza konke konke. UMelania Trump engazi, uMelania waqala umsebenzi wakhe wezopolitiko ngo-2005, xa wayetshata noDonald Trump. … Qhubekeka ukufunda Abona bafazi bahle kwezopolitiko
Ungasifaka njani isiqholo ngokuchanekileyo?
[ad_1] NSA umzila omnandi awuyi kushiya abanye bengenamdla, kwaye uya kukunika ukuzithemba. Xa usebenzisa i-eau de yangasese, kufuneka kukhunjulwe ukuba isandi kunye nexesha levumba elimnandi ligcinwa kunye nezinto ezininzi. Eyona iphambili kukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwesiqholo kumalungu omzimba nakwimpahla. I-BeautyHack imalunga nokuba… Qhubekeka ukufunda Ungasifaka njani isiqholo ngokuchanekileyo?
Iimveliso ezi-5 zokuthambisa ozisebenzisayo ziphosakele
[ad_1] U-TOSenia Wagner uthatha uviwo lwengqondo: abafundi abagqwesileyo - abahlanu, abafundi abasilelayo - ukuphinda benze! 1) I-cream ye-BB Wena: yisebenzise kwisiseko njengethoni. Eneneni, oku ayilolwaphulo-mthetho - kwaye awuyi kohlwaywa njengoRaskolnikov. Kwimeko enye: ukuba isiseko siqhelekileyo… Qhubekeka ukufunda Iimveliso ezi-5 zokuthambisa ozisebenzisayo ziphosakele
izizathu obungazi ngazo
[ad_1] Iirandi, iikhemikhali zasekhaya kunye nezinye izizathu ezingalindelekanga zokuba kutheni iinzipho zikhupha. Ukunqongophala kweevithamini Oonobangela bezikhonkwane zokuqhekeka kunokuba ngaphakathi nangaphandle. Umthi wesundu ngowokuswela iivithamini kunye nezinto ezincinci: i-calcium, ivithamin D, i-phosphorus, i-silicon, i-iron. Ngenxa yokungabikho kwabo, kungekhona nje izipikili ezihluphekileyo, kodwa kunye neenwele kunye nesikhumba. Kwi… Qhubekeka ukufunda izizathu obungazi ngazo
I-Peppermint i-oyile ebalulekileyo yeenwele ezintle: iyasebenza ngokwenene?
[ad_1] TOolumnist uBeautyHack, umsunguli wentsimbi yezithambiso zendalo (@ natureal.ua) uVita Liasota uxelele ukuba kutheni ipepermint i-oyile efunekayo yongezwa kwizithambiso zeenwele kwaye nokuba iyanceda na ukukhulisa ubreyidi esinqeni. “Kwimveliso yezithambiso, sihlala sisebenzisa i-peppermint i-oyile efunekayo-sade sane-scrub esekwe kuyo. It… Qhubekeka ukufunda I-Peppermint i-oyile ebalulekileyo yeenwele ezintle: iyasebenza ngokwenene?
Iifilimu ezi-5 eziphezulu zothando zango-2019
[ad_1] NSAEkuba usuku ludinisayo emsebenzini, uyafuna ukhululeka kwi-melodrama okanye ulahle iimvakalelo zakho ngokubukela imovie ngothando? Siyakumema ukuba uziqhelanise nokukhetha kwethu, okubandakanya ezona zinto zintsha zintle zika-2019. Qala kwasekuqaleni Iifilimu ezilingana noJennifer Lopez (funda… Qhubekeka ukufunda Iifilimu ezi-5 eziphezulu zothando zango-2019
Iinwele ze-18 ezinesitayile seenwele ezinde
[ad_1] Iinjongo zeVVictorian, izinto zeGothic kunye nenkululeko epheleleyo kukhetho lwezixhobo! Iinyanda ezintsonkothileyo yile nto yothando olunqabileyo lwamaVictoria olulula ukuguqulela kwizinwele ezinde. Ukuba ngezixhobo ezinkulu awukho endleleni ngenxa yekhowudi yokunxiba okanye izinto ozikhethayo, ungazikhawulela ekungabonakali okanye kumabhanti e-elastic… Qhubekeka ukufunda Iinwele ze-18 ezinesitayile seenwele ezinde
Page 1 ... Page 44 abaDala izithuba
Akukho zimvo zibonisa.
Ngokuziqhenya kuxhaswe yi WordPress.